Waxaa la soo gabagabeeyey hool galkii laga sameenaayey Hotelka Splendid – STAR FM SOMALIA
Waxaa la soo gabagabeeyey hool galkii laga sameenaayey Hotelka Splendid
Madaxweynaha Wadanka Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, ayaa waxaa uu maanta kormeeray Hotelka Splendid, ka dib markii Ciidamada Burkina Faso iyo kuwa Faransiiska, ay soo gaba gabeeyeen weerarkii lagu qaaday.
Ugu yaraan 26 qof, ayaa waxaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerarkaasi, halka 56 kalana lagu dhaawacay. Dadka la dilay, lana dhaawacay waxaa ku jira ajaaniib. Dadka la dilay ayaa u kala dhashay illaa 18 dal.
Lix illaa toddobo qof oo deganaa hotelka, ayaa gaystay weerarkaasi. Tiro ka mid ah dadka weerarka fuliyay waxaa la sheegay inay dumar ahaayeen. Afar ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday, ayaa la’ogyahay in la dilay.
Madaxweynaha Burkina Faso, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in laba ka mid ah kuwii weerarka gaystay loo aqoonsaday inay dumar yihiin, lana baaraayo halka weerarka lagu soo diyaariyay.
Madaxweynaha oo Warbaahinta la hadlay, ayaa ammaanay Ciidamada Burkina Faso iyo Faransiiska, jawaabta deg degga ah ee ay ka bixiyeen weerarkaasi iyo sida ay ugu gurmadeen dadkii la weeraray.
Madaxweynaha waxaa uu weerarkaasi ku tilmaamay mid fuleynimo ah oo ay ka dambeysay argagaxisada, isagoo ku hanjabay in Xukuumadda Ouagadougou ay dagaal adag la geli doonto kuwa xagjirka ah.
Ururka AQIM oo xiriir la leh Al Qaacidda, ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkan, oo bilowday habeenkii xalay ahaa, inkastoo Dowladdu ay maanta xaqiijisay inay soo afjartay.
Dowladdu waxay sheegtay in kuwii weerarka fuliyay ay qafaasheen lamaane ajaaniib ah. Aqim waxay dhankeeda xaqiijisay inay soo qafaalatay lamaanahaasi, oo ay soo baxayaan warar sheegaaya inay u kala dhasheen dalalka Australia iyo Austria.
Xafiiska Wasaaradda Arrimaha Dibadda Britain, ayaa muwaadiniinta reer Britain kaga digay inay u socdaalaan agagaaraha halka uu weerarku ka dhacay.
Hotelkan la weeraray, ayaa waxaa deganaa dad ajaaniib ah iyo xubno ka tirsan Shaqaalaha Qaramada Midoobe, ee ka hawlgala Magaalada Caasimadda ah ee Ouagadougou.
Dowladda Turkiga ayaa mar kale ku eedeysay Ruushka in ay ku soo xadgudubtay Hawadooda
Dawlada Iran oo laga qaaday cunaqabateyntii saarneyd
Wararka18 mins ago